'सन्त्रस्त आँखाहरु' माथि समालोचनात्मक दृष्टि | मझेरी डट कम
'सन्त्रस्त आँखाहरु' माथि समालोचनात्मक दृष्टि
kbs — Wed, 09/15/2010 - 19:37
सी. बी. आचार्य
मातृका पोखरेलको कथा कृति सन्त्रस्त आँखाहरू (२०६१) यतिखेर मेरो हातमा परेको छ । प्रगतिवादी साहित्यतर्फको चिरपरिचित नाम हो, मातृका पोखरेल । मातृकाको जन्म २०२३ असार ९ गते ठानागाउँ -४ थामखर्क, उदयपुरमा भएको हो । मुक्तालयका कविता विधाबाट साहित्यिक यात्रा प्रारम्भ गरेका पोखरेलका सेतो दरबारको छेउबाट(२०५७) र यात्राको एउटा दृश्य (२०६०) गरी दुईवटा कविता सङ्ग्रहको प्रकाशनपछि तेस्रो कृतिको रूपमा प्रस्तुत कथासङ्ग्रह सन्त्रस्त आँखाहरू प्रकाशित भएको देखिन्छ । कविता विधामा आफ्नै छुट्टै परिचय बनाइसकेका पोखरेलको कथाकारिता पनि आशालाग्दो ढङ्गले अगाडि बढिरहेको देखिन्छ । मातृका पोखरेल साहित्य सिर्जनाका साथै प्रगतिशील ध्रुवका विभिन्न सङ्घसंस्थासँग आवद्ध रहेका युवा व्यक्तित्व हुन् ।
सन्त्रस्त आँखाहरूलाई 'जनमत प्रकाशन' ले २०६१ सालमा बजारमा ल्याएको हो । उक्त कथाकृतिमा चर्चित सर्जक इस्माली र विजय चालिसेले भूमिका लेखिदिएका छन् । यस कृतिमा एक दर्जन विभिन्न शीर्षकका कथाहरू रहेका छन् । तीमध्ये कतिपय कथाहरू विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भइसकेका देखिन्छन् ।
सन्त्रस्त आँखाहरूमा एउटा नयाँ यात्रा, छोराको भाग्य, निर्णय, हरियो बत्ती, सन्त्रस्त आँखाहरू, अविश्वास प्रस्ताव, चुनावको मौसम, फुटपाथ, म यसरी फर्किएँ, हुलिया, परिचित अभिनय शीर्षकका १२ वटा कथाहरू समाविष्ट छन् ।
समसामायिक कटु यथार्थहरूलाई कथाका माध्यमबाट चित्रण गर्दै कथाकार पोखरेलले आफ्ना कथाहरूमा युगीन चेतनाको जीवनवादी स्वर भरेका छन् । प्रस्तुत सङ्ग्रहका कथाहरूले जीवन भोगाइका अभाव, शोषण, भ्रष्टाचार र चरित्रहीनतालाई वर्गीय द्वन्द्वको रूपमा ठम्याउँदै निकासको बाटो पनि देखाइदिएका छन् ।
सङ्ग्रहमा समाविष्ट पहिलो कथा नयाँ एउटा यात्रामा लैङ्गिक विभेदको मुद्दालाई सशक्त रूपले उठाइएको छ । कथाकी केन्ऽीय पात्रा मालती गर्भवती छे । घरभित्रको सारा काम भ्याएर वस्तुभाउको भकारो सोर्नेदेखि घाँस-पत्करको सारा काम मालतीको काँधमा लादिएको छ । लोग्ने दिनभरि गाउँ डुलेर हिंड्छ । ऊ श्रीमतीलाई छोरो उत्पादन गर्ने मेसिन ठान्छ ।
छोरो नजन्मिएको, छोरीलाई सन्तान नमान्ने सामन्ती संस्कारले युक्त गरिब परिवारकी काँइली छोरी मालतीको विहे १५ बर्षकै उमेरमा भएको थियो । यता घरमा पनि स्थिति त्यही थियो । जसरी पनि मालतीले छोरो पाइदिनुपर्ने, नभए सौताको सामना गर्नुपर्ने । उसले त्यस्तो सामाजिक प्रचलनबाट छुटकाराको यात्रा तय गर्छे । ऊ 'म' पात्रसँग घोषणा गर्छे - म एउटा यात्रामा निस्केकी छु, विवेक विरुद्धको यात्रामा । उसलाई लोग्नेको घर छोडेकोमा प्रायश्चित छैन, बरू हौसिन्छे र भन्छे -म अहिले धेरै खुसी छु ।
मालती नेपाली समाजको ज्वलन्त प्रतिनिधि पात्र हो भने उसले जन्मेदेखि घर नछोडे सम्मका घटनाहरू नेपाली समाजका यथार्थपरक प्रतिनिधिमूलक घटनाहरू हुन् ।
छोराको भाग्य सङ्ग्रहको दोस्रो कथा हो । यो कथामा रिट्ठे प्रमुख पात्र हो । रिट्ठे र उसको मालिक मुखियाको छोरो संयोगले एकै दिन उही समयमा जन्मन्छन् । मुखियाको चरम शोषणबाट चुसिएको परिवारमा जन्मेको रिट्ठेको छोरो मरञ्च्यासे हुन्छ भने मालिकको छोरो हृष्टपुष्ट भएर जन्मन्छ । मुखियाकै छोराको जस्तै भाग्य बोकेर ल्याएको हुनुपर्छ रिट्ठेको छोराले पनि, यस्तो विचार रिट्ठे, उसकी स्वास्नीको मात्र होइन, छिमेकी र पँधेर्नीहरूको पनि छ । यस विचारको आधार उही साइतमा दुई बालकको जन्म हुनुबाहेक अरू केही छैन । छोरो पाएको खुसियालीमा मुखियाको घर रमझममा मग्न छ । यता रिट्ठेकी सुत्केरी स्वास्नीले एकछाक पनि पेटभरी खान पाएकी हुन्न । रिट्ठेको थातबास मुखियाको नाममा दर्ता भइसकेको हुन्छ । यसरी यस कथामा वर्गीय सामन्ती समाजको अमानवीय शोषणको कटु यथार्थलाई चित्रण गरिएको छ ।
अर्को कथा हो, निर्णय । कथाको पात्र रामलाल १५ बर्षपछि महेन्द्र राजमार्ग छाडेर उत्तरतिरको मोटरबाटोमा पर्ने स-साना बस्तीहरू हुँदै गाडीमा चढेर पार्टी कामले पूर्वतिर गइरहेको हुन्छ । त्यो बस्ती रामलाललाई राजनीतिको उच्च ओहदामा पुर्‍याउने थलो हो । पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको पृष्ठभूमि बोकेको उक्त गाउँबाटै रामलाल राजनीतिक जीवनमा माथिल्लो तहमा उक्लेको हो । जनताको मुक्तिका लागि लडेको रामलालको त वर्ग रूपान्तरण भएको छ तर जनताको स्थितिमा किञ्चित परिवर्तन आएको छैन । यस कथाले २०४६ को परिवर्तनपछि एकथरी कम्युनिस्ट नेताहरूमा देखा परेको सैद्धान्तिक विचलन, भ्रष्ट र भोगी संस्कृतिलाई नङ्ग्याएको छ ।
सङ्ग्रहकै अत्यन्त शक्तिशाली कथा हो, पश्चिमतिर । यो कथाले जनयुद्धले गति प्राप्त गर्दै रहँदा गुमाने जैसी (संन्यासी ?) जस्ता स्थानीय जाली-फटाहाहरू आफूले गरेको शोषणको विरोध गर्ने, तिलकबहादुर रानामगर र अमरबहादुर खड्काजस्ता होनहार युवाहरूको प्रहरीद्वारा हत्या गराएर आतङ्क मच्चाउँछन् । रेडियो नेपालबाट सोसम्बन्धी दिग्भ्रमित समाचार देश र दुनियाँलाई सुनाएको प्रसङ्ग यथार्थ चित्र कथामा छ । गुमानेले सीधा-साधा श्रमजीवी जनतामाथि गरेको अन्यायपूर्ण शोषणको विरोध गरेवापत गुमानेका चाटुकार र प्रहरी प्रशासनका सुराकीद्वारा निमोखो युवालाई प्रहरीको गोलीको सिकार बनाइन्छ । साथमा क्याम्पसको विद्यार्थी अमरबहादुर पनि ज्यान गुमाउन पुग्छ । गाउँका होनहार युवाहरूको हत्याको शोकमा डुबेको गाउँ र परिवारको मुटुमा लागेको घाउ ओबाउन नपाउँदै हत्याराहरू थप ज्यान मार्ने धम्की दिँदै घरहरूमा पसेर हातपातसमेत गर्छन् ।
कथामा यो एउटा प्रतिनिधि घटनाको रूपमा आएको छ । जनयुद्ध कालमा कथामा वणिर्तभन्दा कयौं गुणा क्रुर घटनाहरू गाउँ र बस्तीहरूमा घटाइएका छन् । जनयुद्धको आधारभूमि मानिएको रोल्पाको परिवेशमा संरचित प्रस्तुत कथाको घटना जीवन्त प्रस्तुति बनेको छ ।
प्रस्तुत सङ्ग्रहको पाँचौ क्रमाङ्कमा रहेको कथाको शीर्षक हो, हरियो बत्ती । शीर्षकको व्यञ्जना अर्थ हुन्छ-अगाडि बढ्ने सङ्केत । यो कथाले एउटा सामान्य कार्यकर्ता अवसरवादमा फस्यो भने आस्थावान दृढ क्रान्तिकारी कार्यकर्ताहरू कसरी क्रमशः पाखा लाग्दै जान्छन् र तिनै अवसरवादी कार्यकर्ताको नव धनाढ्य वर्गमा रूपान्तरण भएपछि क्रान्ति गर्ने लक्ष्य र उद्देश्यहरू साथ गठित कम्युनिस्ट पार्टी क्रमशः दक्षिणपन्थी धारमा फस्न पुग्छ भन्ने यथार्थ प्रस्ट्याइएको छ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा निकै हदसम्म मौलाएको दक्षिणपन्थी अवसरवादको सपाट चित्रण हो हरियो बत्ती कथा ।
सन्त्रस्त आँखाहरू सङ्ग्रहकै शीर्षक पाएको कथा हो । प्रस्तुत कथाका पात्रहरू रनेम्पा, मञ्जिते, रनशेर तिलुङ्ग राई हुन् । उनीहरूको पुख्र्यौंली पेसा भारी बोक्नु हो । रनेम्पा र मञ्जिते समवयी सहकर्मी मजदुर हुन् भने रनशेर ३ कक्षा पढेपछि पुख्र्यौंली पेसा सिकाउन ल्याइएको ११ वर्षे बालक हो । फिलिप्स रेडियो बोक्ने अर्को भरिया मजदुर शेरमानले उनीहरूले भारी बोकेर गुजारा चलाइरहेको कटारीदेखि १० दिन भारी बोकेर पुगिने गोरेटो मोटरबाटो बन्ने भो भन्ने समाचार सुनाउँछ । यो समाचारले उनीहरूको पुख्र्यौंली भरिया पेसा खतरामा पर्ने चिन्ताले मन खिन्न पारेको छ । भारी बोकेर जहान परिवारको पेट पाल्नु उनीहरूको पुस्तैनिक बाध्यता हो । उनीहरूसँगै आम्दानी वा व्यवसायको थप कुनै विकल्प छैन । च्यास्मीटार गाउँमा अन्न त उत्पादन हुन्छ तर नेपालका अन्य गाउँजस्तै परम्परागत मौसमी-निर्भर खेती-प्रणाली भएकाले त्यस गाउँमा मुस्किलले वर्षमा तीन महिना खान पुग्छ । बाँकी नौ महिना भरियाको काम गरेर गुजारा गर्नुपर्ने विवशता छ । यही जिन्दगी भोगिरहेको रनेम्पा र त्यस क्षेत्रका तिलुङ्गे राईहरूलाई मोटरबाटो बन्ने समाचारले मन गिजोलिदिएको छ । बाल भरिया रनशेर भने मोटरबाटो आउने खबरबाट प्रसन्न छ ।
यसरी विकासका नाममा बनाइने योजनाविहीन बाटाघाटाहरूले ग्रामीण जनताको जीवनस्तर उकास्नु पर्दछ, भत्काउने होइन श्रमजीवी जनताका सन्त्रस्त आँखाहरूलाई राज्यले विश्वासमा लिनुपर्दछ भन्ने आशय प्रस्तुत कथाको गर्भित विचार हो ।
सङ्ग्रहको अर्को कथा 'अविश्वास प्रस्ताव' २०४६ सालको जनआन्दोलनअघि राणाको सक्रिय नेतृत्वमा सत्ताको हालीमुहाली गरेर कुस्त कुम्ल्याएको, देशमा बहुदल बहालीपछि छटपटाहटको तातो तेलमा जिउँदो माछो उफ्रेझैं भएको पूर्वपञ्चहरूको मानसिकताको प्रनिनिधि दृश्यको शब्दचित्र हो । कथाको पूर्वपञ्चको प्रतिनिधि पात्र हो -हीराप्रसाद ।
वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पञ्चहरूबीच एउटा भय थियो, त्रास थियो अनि हैसियत र भ्रष्टाचारबाट कुम्ल्याएको सम्पत्तिको पोल खुल्ने मनोवैज्ञानिक पीडा व्याप्त थियो । भनिन्छ, गल्ती गर्नेको मन त्रसित रहिरहन्छ । यस कथाको पात्र हीराप्रसाद यी र यस्ता पीडाबाट उन्मुक्तिको खोजीमा छन् ।
चुनावको मौसम अर्को महìवपूर्ण कथा हो । शनकराम, दिपिया, सन्तोष, फूलो 'म' आदि यस कथाका पात्रहरू हुन् । शनकराम यादव २०४८ सालको निर्वाचन जितेपछि मन्त्री हुन्छ र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रकी विधवा एक बालककी आमा दिपियालाई बम्बैमा पुर्‍याएर बेच्दछ । छोरो सन्तोष विचल्लीमा परेर हुर्कन्छ । उसलाई संसदीय व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जागृत हुन्छ र भन्छ -संसदीय ब्यवस्थाको जालमा नफसौँ ।'
सङ्ग्रहको अर्को कथा फुटपाथ हो ।
काठमाडौँको फुटपाथमा सानातिना व्यापार गरेर गुजारा चलाउन बाध्य मान्छेहरूले भोग्नु परेका विडम्बनापूर्ण यथार्थहरू फुटपाथमा उद्घाटन भएका छन् । म यसरी फर्किएँ शीर्षक कथामा युवाहरूको विदेश पलायनले देशको स्वाभीमान र स्वाधीनतामा धक्का लाग्न सक्छ भन्ने लेखकीय मान्यता प्रस्तुत कथामा स्थापित भएको छ ।
हुलिया कथा दसबर्षे जनयुद्धको प्रहरी सिविरतर्फको तस्बिर हो । कथामा एस.एस.पी. माधव, डी.एस.पी दयाराम, अन्य प्रहरी होटल पर्वतका सञ्चालक र कामदारहरू आदि पात्रका रूपमा आएका छन् भने प्रहरीको हिटलिस्टमा परेको युवकको फोटोको हुलिया विषयवस्तुको रूपमा आएको छ ।
उक्त युवक कालो वर्णको छ । प्रहरीहरू त्यस युवकलाई रुकुम रोल्पातिरको माओवादी कार्यकर्ता ठान्छन् र गिरफ्तारीका लागि प्रहरीका सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरिन्छ । प्रहरी खोरमा सारा काला वर्णका युवाहरूलाई ल्याएर थुनिन्छ । असम्बद्ध युवाहरूलाई अनावश्यक दुःख दिइन्छ । प्रस्तुत कथाले 'दसजना दोषी फुत्कियोस तर एक जना पनि निरपराध व्यक्तिले सजाय नपाओस्' भन्ने उक्तिको बेइज्जत गरेको छ । प्रस्तुत कथाले प्रहरीहरूको कार्यदक्षताहीन हर्कतबाट जनताका निर्दोष छोराछोरीहरूले खेप्नुपरेको सास्तीको वास्तविक चित्र उतारेको छ ।
कथा सङ्ग्रहको अन्तिम शीर्षकको कथा हो, परिचित अभिनय । यो कथाका दुई पात्रहरू रमिला र शान्ताबीच वादविवाद गराएर कथाकारले उनीहरूको चरित्रलाई कलात्मक द्वन्द्वद्वारा चित्रण गरेका छन् ।
रमिला र शान्तासँगै हुर्केका बालसखा हुन् । उच्च शिक्षा प्राप्तिका लागि यी दुबै जना काठमाडौं आएका थिए । दुबैको विवाह सरकारी अधिकृतसँग हुन्छ । रमिला सङ्घर्षशील नारी भएकीले उसको जीवनदृष्टि समाजमुखी छ, सचेत छ, कर्तव्यनिष्ठ र नैतिक चेतनायुक्त छ तर शान्ताको चिन्तन जसरी पनि कमाऊ, मोजमस्ती गर, देश, समाज, सङ्घर्षजस्ता पक्षहरू अनावश्यक हुन् भन्ने सङ्कीर्ण व्यक्तिमुखी रहेको छ । यही चिन्तनका दुई विपरीत ध्रुवमा उत्रिएका पात्रहरूबीचको घनिष्टता क्रमशः पातलिन्छ । शान्ताका श्रीमान् भ्रष्टाचार गरेर धन कमाउँछन् । शान्ताहरूले बत्तीसपुतलीमा एउटा सुन्दर र भव्य घर खरिद गरे । उता रमिलाको जीवन सामान्य ढङ्गमा चलिरहेको हुन्छ । ऊ सन्तुष्ट छे । अनैतिक ढङ्गले भए पनि सम्पन्न जीवन विताउनु पर्छ भन्ने शान्ता रमिलाले वृद्धाश्रम खोल्ने प्रस्ताव राख्दा यस्तो प्रतिक्रिया जनाउँछे - आ ! तँ पनि यी नचाहिँदा कामतिर लागिछस् । बसेर खान छोडेर यी चिन्नु न जान्नुका बूढाबूढीलाई स्याहारेर के काम ? म त खुट्टा पसारेर खान्छु ।
त्यसपछि शान्ताको लोग्नेलाई घुस प्रकरणमा प्रहरीले गिरफ्तार गर्छ । जागिर छुट्छ । घर विक्री हुन्छ । बीस वर्षपछि शान्ता रमिलाभन्दा कता हो कता उँधो झरिसकेकी हुन्छे र रमिलाले एकदिन शान्तालाई पशुपतिमा फूल बेच्दै गरेको देख्छे ।
एउटा जीवन्त जनपक्षीय साहित्य देश, काल र परिस्थितिबाट असम्पृक्त रहन सक्दैन । प्रस्तुत कथाहरूको सामाजिक परिवेश २०४८ देखि २०५८ पूर्व रहेको देखिन्छ । विषयवस्तुगत परिवेशको सन्दर्भ उधिन्दा वर्तमान नेपाली समाजमा मूल्यहरू विघटन भइरहेका छन्, यस्ता मूल्यहरू र मान्यताहरूको क्षय अभियन्ताहरूबाटै भएका छन् । त्यसकै परिणामस्वरूप यहाँ राजनीतिक विचार र समाज परिवर्तनका वैज्ञानिक हतियार पनि क्रमशः खिया पर्दै गइरहेका छन् । बसिखाने र गरिखाने वर्गबीचको द्वन्द्व सहरमा मात्र सीमित छैन, नेपाली ग्रामीण जनजीवनमा पनि प्रकट हुन थालेका छन् । जनतामाथि शोषणका नयाँनयाँ उपकरणहरू प्रयोग गर्दै हावापानी सुहाउँदो भनिएको पञ्चायती निरङ्कुश व्यवस्थामा पालितपोषित भएर पनि आतप्त रामलाल, रामनाथहरूको काँधमा चढेर सत्ता प्राप्त गरेपछि रामनाथजस्ता पात्रहरूलाई धोका दिने कथित कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको नैतिकता स्खलन भएको चरित्र कथाकारले अनावरण गरिदिएका छन् ।
संसदीय व्यवस्थामा मौलाएको विकृति र विसङ्गति, विकासका नाममा जनताका आवश्यकताहरूप्रतिको उपेक्षा, नेपाली युवाहरूको प्रतिभा पलायनका समस्या, विदेशी भूमिमा नेपाली युवाहरूले भोग्नुपरेका निर्मम यथार्थहरू, नारी एवम् गरिब जनताले न्याय नपाउने परम्परागत सामन्ती साङ्लो, पतिलाई भ्रष्टाचारको खाल्डोमा जाक्ने कथित आधुनिक उपभोगवादी पत्नी, समाजका उपेक्षित वर्गको सेवामा समर्पित महिलाजस्ता विषयवस्तुहरू सङ्ग्रहका अन्तर्वस्तुगत आकर्षणहरू परिवेशका रूपमा रहेका छन् ।
सङ्ग्रहका कथाहरूले अत्यन्त जटिल मुद्दा, पात्र र प्रवृत्तिहरूलाई सरल र सहज शब्दचित्रमा अङ्कित गर्ने चेष्टा गरेका छन् । जटिलभन्दा जटिल विषयवस्तुहरूलाई पनि सरलतापूर्वक बुन्न सकिन्छ भन्ने कुराको उदाहरण बनेको छ । पोखरेलका कथाहरूको भाषाशैली कथाहरूमा प्रयुक्त भाषा कतै विवरणात्मक देखापर्छ भने कतै वर्णनात्मकता पाइन्छ । उनी कवितामा स्थापित व्यक्तित्व हुन् । यस सङ्ग्रहका कथामा भाषिक दृष्टिले उनको काव्यात्मक व्यक्तित्वको छायाँ त्यति देखिँदैन । यो पोखरेलको कथाकार व्यक्तित्वको भिन्न मौलिक पाटो मान्न सकिन्छ ।
प्रतीक र बिम्बको प्रयोग साहित्यमा 'मानिसको तस्बिर' भन्ने अर्थमा प्रयुक्त गरिन्छ । प्रस्तुत कथा सङ्ग्रहका कथाहरूभित्र प्रकृतिको चित्रणद्वारा पात्रहरूको सामाजिक, आर्थिक परिस्थितिको 'मानसिक तस्बिर' खिचिएको पाइन्छ । जस्तो 'डिलमा गोदावरी र मखमली फूलका बोटहरूले कोपिला हालिरहेका थिए । एक मनले सोची फूलका बोटहरू भाँचिए पनि भाँचिऊन्, भारी डिलतिर बिसाउँदा सजिलो हुन्छ । फेरि अर्को मनले सोची त्यतिका मिहिनेत गरेर हुर्काएका फूलहरू कसरी बिगार्ने ? (एउटा नयाँ यात्रा पृ. ११) "उपर्युक्त कथनलाई अविधार्थमा हेर्दा कथाकी पात्रा मालती भारी बिसाउने सजिलो ठाउँ खोजिरहेकी छे तर यहाँ लेखकले 'कोपिला' को प्रयोग मालतीको पेटभित्र हुर्किरहेको शिशुको सङ्केतको रूपमा गरेका छन् भने मालतीको पारिवारिक परिस्थितिको बीच गर्भवतीको प्रतीक कोपिला र फूलको बोटको प्रतीक मालती स्वयं हो । उसको अन्तर्चेतनाको पीडालाई फूलको बोट भाँचू कि नभाचूँ भन्ने द्वन्द्वको रूपमा चित्रण गरेका छन् ।
यस किसिमको वस्तुको सुन्दर चित्रण अन्य कथाहरूमा पनि पाइन्छ । जस्तो ः - 'जेठको खडेरी अचेल गाउँमा आतङ्कको रूपमा भित्रिएको छ । (पश्चिमतिर पृ. २१.)'
लेखकले उपर्युक्त वाक्यमा प्रयोग गरेका 'खडेरी' शब्द आतङ्कको रूपमा प्रयुक्त भएको छ । विम्बले गाउँका सर्वसाधारण जनताबीच आतङ्क सिर्जना गर्न भित्रिरहेका सत्ताका स्थानीय चाटुकार र प्रहरी प्रशासनको जनविरोधी हर्कततर्फ सङ्केत गरेको छ । यसरी कथाकार पोखरेल प्रगतिवादी कथा साहित्यमा आफ्नो अलग पहिचानगत विशेषताहरूसहित स्थापित युवा स्रष्टा हुन् भन्न सकिन्छ ।
मातृका पोखरेलको सन्त्रस्त आँखाहरूमा पात्रविधानमा विशेष सतर्कता अपनाइएको पाइन्छ । पात्रविधानको शास्त्रीय सूत्रलाई पूर्णतः क्रमभङ्ग गरिएको छ ।
कथाका पात्रहरू लेखकीय कल्पनामा रुमलिएका छैनन् । ती यथार्थ लाग्छन् । नेपाली समाजमा विद्यमान वर्गीय विभेदको अन्तर्विरोधसँग शोषित/पीडित पात्रहरू जुधिरहेका देखिन्छन् । पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्ता बीचको अन्तर्विरोधमा पात्रहरूको सचेत सहभागिता देखापर्दछ । मालती (एउटा नयाँ यात्रा) को विद्रोह, रिट्ठे (छोराको भाग्य)को जीवनमाथि भएको तुषारापात एवम् रामलाल (पश्चिमतिर) को अवसरवादी चरित्रले कथाले सङ्घर्षशील पात्रहरूलाई वास्तविकताको धरातलमा उभ्याएर उनीहरूले भोगिरहेको जीवन र त्यसको कारक तìवहरूप्रति सचेत र सजग गराइएको पाइन्छ ।
कथाको विषयवस्तुलाई फरक प्रसङ्गमा उठाउँदा पनि पात्रका नामबाटै तिनका चारित्रिक मूल्यमा आएको ह्रासलाई ध्वनित गर्नु र राष्ट्रमाथि गरेको हानिलाई साङ्केतिकरूपमा अभिव्यक्ति दिन सक्नु कथाकार पोखरेलको मौलिक विशेषताका रूपमा लिन सकिन्छ ।
यसरी पात्रविधानका दृष्टिले अर्थपूर्ण विधि र प्रक्रिया अपनाएर कथाकारले प्रगतिशील कथाशिल्पमा एउटा नवीन आयाम थप्ने चेष्टा गरेका छन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।
प्राप्ति र सीमा
प्रस्तुत सङ्ग्रहका कथाहरू माक्र्सवादी सौन्दर्यशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट खिचिएको नेपाली वर्गीय समाजका सफा चित्र हुन् । वास्तवमा माक्र्सवादी सौन्दर्यशास्त्र भनेको सत्यको अन्वेषण हो । अध्यात्मवादीले भने जस्तो जड होइन, पारलौकिक होइन । मानवजीवनका परिवेशमा उपस्थित वस्तु र वस्तुगतता नै वैज्ञानिक सत्य हो । त्यो गतिशील हुन्छ, द्वन्द्वात्मक हुन्छ अनि इन्द्रीय ग्राह्य हुन्छ ।
कथाकारको आत्मस्वीकृति पनि छ कल्पनाको आधार जीवनको वास्तविकताभन्दा टाढा नहोस् ....मेरो उद्देश्य सत्य हो र म त्यसलाई आदर गर्दछु । कथाकार पोखरेलले व्यक्ति र समाजको बीचमा रहने सम्बन्ध र उत्पन्न हुने अन्तर्विरोधको तस्बिरलाई यथार्थको धरातलबाट सफलतापूर्वक खिचेका छन् । कथामा नवीन चेतना र पुराना संस्कारका बीच चलिरहेको अन्तर्विरोधलाई केलाउने आफ्नै शैली बनाइएको छ । पोखरेल वर्तमानका प्रशवमय पीडाहरूको बीच भविष्यप्रति आशावादी छन् । वर्तमानमा बसिखाने वर्गले खडा गरेको प्रतिकुल परिस्थिति गरिखाने वर्गका मानिसहरूको संज्ञानात्मक सङ्गठित विद्रोहहरूद्वारा पूर्णतः पराजित हुनेछ र अन्ततः श्रमजीवीको अन्तिम विजय सुनिश्चित छ भन्ने विश्व दृष्टिकोणले कथा ओतप्रोत छन् । यही नै कथाकार मातृका पोखरेलको प्राप्ति हो । नेपाली प्रगतिवादी कथा साहित्यको महìवपूर्ण उपलब्धिको रूपमा सन्त्रस्त आँखाहरू अमर कृति बनेको छ ।
कथाहरूको आन्तरिक बुनोट र बाह्य बनोटमा शिल्पगत परिष्कार गर्न सकिने ठाउँहरू प्रशस्त छन् । प्रगतिवादी साहित्यमा कलापक्षलाई विचार पक्षले ढाक्छ भन्ने प्रतिकित्ताका समालोचकहरूले प्रस्तुत सङ्ग्रहमा नाक खुम्च्याउन सक्छन् तर "कला कलाका लागि" नभएर "कला जीवनका लागि" भन्ने दृष्टिकोणले सन्त्रस्त आँखाहरू एक उत्कृष्ट कृति हो भन्न हिचकिचाउन पर्दैन । वर्णविन्यास, वाक्य सङ्गठन तथा उखानमूलक सुक्तिहरूको गलत प्रयोगले भ्रम सिर्जना नगर्लान् भन्न सकिन्न । यहाँ एउटा सन्दर्भ उदाहरणको रूपमा अघि सार्न सकिन्छ । 'झण्डै ज्यान नगएको (सन्त्रस्त आँखाहरूमा रनेम्पाको भनाइ पृ.३३, तेस्रो अनुच्छेद) । उक्त भनाइमा पात्र वा लेखकले भन्न चाहेको 'झण्डै ज्यान गएको' अर्थात् बाँचियो हो तर प्रयुक्त वाक्यले 'ज्यान गएको' अर्थात् मरियो भन्ने अर्थ दिएको छ । यस्ता अत्यन्त सामान्य पक्षमा पनि यथोचित ध्यान गएको देखिँदैन । त्यस्तै पश्चिमतिर कथामा एउटै पात्रको थर फरकफरक भएको छ, कहीँ 'गुमाने जैसी' र कहीँ चाहिँ 'गुमाने संन्यासी' भनिएको छ । यसबाट पाठकहरू अलमलमा पर्न सक्छन् । यी र यस्ता कसरमसरहरू कथामा प्रशस्त भेटिन्छन् ।
मातृका पोखरेलका कथाहरू यथास्थिति विरुद्ध उभिएका छन् । उनका पात्र, परिवेश र घटनाहरू समाजको आमूल परिवर्तनतर्फ परिलक्षित छन् । यहाँ विजय चालिसेको कथन सान्दर्भिक ठहर्छ ः कलाको अन्तर्वस्तुमा सामाजिक चिन्तन र जीवनका विविध उपकरणका साथै राजनीतिक पनि हुन्छ र मातृकाका कथामा यसको उदाहरण पाइन्छ ।
प्रस्तुत सङ्ग्रहका कथाहरूमा समाजमा विद्यमान अन्तर्विरोध, गलत चिन्तन एवम् रूढिग्रस्त मानसिकताका जटिलताहरूलाई सरल, सुवोध भाषामा उतारिएको छ । छोटो बसाइमै पढी सिध्याउन सकिने मातृकाका कथा समाजको अग्रगामी चेतनातर्फ स्पष्ट दिशाबोध गर्न सफल छन् । यसरी नेपाली प्रगतिवादी साहित्यको एक महìवपूर्ण प्राप्ति हो - सन्त्रस्त आँखाहरू ।
यही मझेरी काफी छ
दौड र परिक्रममा पछि
यस्तो छ नेपाल यो
अजम्बरी एउटा नाता
जातीय कट्टरता एउटा दम्भ
मुसलमानी चुरौटी र नेपाली भाषा : एक अध्ययन
कोल्टे फेरिसकेछ समयले
मेरी आमाको चीर हनन् नगर अब अरु
रगत हुन्छ रातै दलित
निस्सास्सिएको मेरो कविता
आघौँ तैँले घर बनाइहाल्नु परोस् !
फूलै फूलको आगमन